सिंगै हलमा ६ जना दर्शक ! (तस्विरहरु) – Nepal Press
नेपाली चलचित्रकाे दुर्दशा
महानायक काण्डको साइड इफेक्ट : ‘डाँडाको बरपिपल’ सुनसान !
२०७८ असोज २७ गते १७:०३
काठमाडौं । लामो समयको अन्तरालमा हिजो एउटा नयाँ नेपाली चलचित्र हलमा रिलिज भयो । दशैंको अवसरमा रिलिज गरिएको चलचित्रले दर्शकलाई हलमा फर्काउने आशा आम चलचित्रकर्मीले राखेका थिए । तर पहिलो गाँसमै ढुंगा झैं भएको छ ।
शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘डाँडाको वरपिपल’ रिलिज भएको दोस्रो दिन हामी सिभिल मलको क्यूएफएक्समा पुगेका थियौं । तर, हलभित्र गएर हेर्दा विरक्तलाग्दो दृष्य देखियो । सिंगै हलभित्र जम्माजम्मी ६ जना दर्शक थिए । ४ जना वयस्क र २ जना बालबालिका । हलबाट निस्कने बेला हामीले उनीहरुसँग कुरा गर्दा कोही पनि बोल्न तयार भएनन् ।
लामो समयपछि रिलिज भएको नयाँ चलचित्र, त्यो पनि मल्टिस्टारर । भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, गौरी मल्लजस्ता लिजेन्डदेखि सलोन बस्नेत, रुबिना थापासम्मका नयाँ पुस्ताका प्रतिभाहरुले यसमा अभिनय गरेका छन् । दसैंको विदामा यो चलचित्रले राम्रै संख्यामा दर्शक तान्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दोस्रो दिनमै फिल्मको व्यापार दयनीय देखिएको छ । फिल्मी भाषामा भन्दा ‘डाँडाको वरपिपल’ ले पानी पनि माग्न पाएन ।
किन हलमा गएनन् त दर्शक ? यसका प्रमुख दुई कारण छन् ।
पहिलो त कोरोनाको लहर केही शान्त भए पनि समाप्त भएको छैन । अहिले पनि मानिसहरु भिडभाडसँग डराइरहेका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्र वाध्यात्मक नभएकाले ‘रिस्क’ लिन कोही पनि चाहिरहेका छैनन् । नेपालमा मात्र नभएर भारतमा पनि दर्शक हलमा आएका छैनन् ।
त्यसो त डाँडाको वरपिपल रिलिज हुनुपूर्व नै फ्लप बन्ने छनक देखिएको थियो । राजेश हमालको महानायकत्वमाथि प्रश्न उठाएकाले भुवन, शिव र शोभितसँग दर्शक आगो बनेका थिए । राजेश हमालका समर्थक दर्शकले यस चलचित्रका गीतमा ‘डिसलाइक’ को अभियान नै चलाएका छन् । साथै, युट्युटदखि टिकटकसम्म आएका प्रतिक्रियामा धेरैले यो चलचित्र बहिष्कार गर्ने बताएका छन् ।
चलचित्रको लगानी धरापमा पर्ने देखेपछि निर्देशक बस्नेतले आफूलाई सच्याउन पनि खोजेका हुन् । आफूले गल्ति बोलेको भनेर माफी मागे । चलचित्रको एउटा कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्वीरलाई प्रमूख अतिथि बनाए । एक टिभी प्रस्तोताको मध्यस्थतामा राजेश हमालको प्रवचन पनि सुने । तर केही गर्दा पनि दर्शक उनीसँग खुशी भएनन् । अहिले पनि शोभितमाथि गालीको वर्षा भइरहेकै छ । उनीमात्र नभएर राजेश हमाललाई महानायक नमान्ने जोकसैलाई दर्शकले लखेटिरहेका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ असोज २७ गते १७:०३
3 thoughts on “सिंगै हलमा ६ जना दर्शक ! (तस्विरहरु)”
कति हुने त यो भन्दा धेरै ?
टेकबहादुर लामा says:
यदि बेला आम मानिस कोरोनाको कारणले बिहान बेलुका छाक टार्न गार्हो भएको अवस्थामा रहेको छ अनि को हेर्न जान्छ त हलमा
चुडामणी राइ says:
नायक बन्ला कोहि पैसा खर्चिदा तर महानायक दर्शकले दिने सम्मान हो त्यो राजेस दाइले बाहेक अरुले गुमाइसकेको छ ।